Madaxweynaha Soomaaliya oo maanta hadalo ka horjeediyay Baarlamanka Soomaaliya – SBC
Madaxweynaha Soomaaliya oo maanta hadalo ka horjeediyay Baarlamanka Soomaaliya
Madaxweynaha Dowlada Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh maxamuud oo maanta Hortagay Baarlamanka Soomaaliya ayaa ka hadlay arimobadan oo ay ka mid tahay Arinta Xirnaanshaha wadooyinka Magaalada Muqdisho, Shirka ka socda Kismaayo iyo weliba Amaanka Guud ee dalka.
Waxa uu Xasan Sheekh Maxamuud sheegay in intii ay xaniban yihiin wadooyinka Muqdisho maalintii 3aad ay ciidamada dowladu ka hortageen falal dhibaateyn loogu geysan lahaa shacabka waasida uu hadalka u dhigaye.
Waxa uu intaasi ku daray Madaxweynuhu in dowladiisu ay aad u dooneyso in ay ka hortagto khataro dhanka Amaanka oo ka dhaca Magaalada caasimada ah ee Muqdisho.
“Dagaalkii fool ka foolka ahaa ee ka dhici jiray muqdisho hada waxa uu isku bedelay, isqarxin khasaare badan sababa, sidaa awgeed waxan sameyneynaa ka hortag intii aan awoodno” sidaasi waxaa yiri MAdaxweynaha Dalka Xasan Sheekh Maxamuud.
Madaxweynuhu waxaa kale oo uu ka hadlay Arimaha shirka ka socda magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubadda hoose, kaa soo uu ku sheegay in lagu dhisayo maamul goboleed ka dowlad ahaanna ay taageersan yihiin in maamul goboleedyo la dhiso laakiin loo baahan yahay in la tixgeliyo oo la raaco dastuurka qaranka Soomaaliyeed.
Dhinacyo kale oo badan ayuu taabtay intii uu hadlayay madaxweyne Xasan, waxaana ka mid ahaa safaradii uu ku gaaray magaalooyin ay ku jirto magaalada Garoowe xarunta Dowlada Puntland iyo kulamadii uu ku soo qaatay.
Waxaa uu sheegay Madaxweynuhu in ay ku soo dhamaadeen kulamadii ka dhacay Magaalada Garoowe ee uu la galay Madaxweynaha Puntland kuwo ku soo dhamaaday is afgarad iyo isku soo dhowaansho inkastoo ay jiraan qodobo aan weli xal rasmi ah laga gaarin.
180 Mudane ayaa xaadir ahaa oo dhageysanayay Hadalka madaxweyne Xasan Sheekh, waxaana shir gudoominayay kulanka Baarlamanka Maanta Gudoomiye ku xigeenka Baarlamanka Jaylaani Nuur IIkar.